फेरि सल्बलाए चरेस कारोबारी, इन्धन बोक्ने ट्याङ्करमा गाँजा तस्करी !
काठमाडौं, ३ वैशाख–विगत १ वर्षयता प्रहरीले छिटफुट मात्रामा गाँजा र चरेस फेला पारे पनि ठूलो मात्रामा बरामद गरेको थिएन । गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा नै विशेष निगरानी बढाएपछि तस्करी कम भएको प्रहरी अनुमान थियो ।
तर प्रहरीको अनुमान विपरीत नयाँ वर्षकै दिन (वैशाख १ गते) ठूलो मात्रामा चरेस बनाउन तयार पारिएको गाँजा (चिप्पड) बरामद भयो, त्यो पनि इन्धन बोक्ने ट्याङ्ककरबाट ।
नेपाल आयल निगमको थानकोटस्थित डिपोमा इन्धन झारेर ना ४ ख ५३६८ नम्बरको ट्याङ्ककर पुनः इन्धन ल्याउन भन्दै थानकोटबाट नागढुङ्गाको ओरालो झर्यो । तर काठमाडौंको चन्द्रागिरी–२ झ्याप्ले खोला पुग्नेवित्तीकै सडक किनारमा रोकियो ।
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोलाई सूचना आइपुगेको थियो, तेल बोक्ने ट्याङ्ककरमा गाँजा तस्करी हुँदैछ । सोही सूचनाको आधारमा ब्यूरोको टोली झ्याप्ले खोलामा पुगिसकेको थियो ।
ट्याङ्ककरमा गाँजा लोड हुन शुरु मात्रै भएको थियो, व्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ट्याङ्कर चालक र अर्का एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो ।
ट्याङ्ककरको अगाडिको भागमा राखेर त्रिभुवन राजपथको बाटो भएर सर्लाहीको मलंगवा हुँदै भारततर्फ गाँजा तस्करी गर्ने योजना थियो । तर लोड गर्न नपाउँदै गाँजा कारोबारी इमानसिंह स्याङ्बो पक्राउ परिहाले । प्रहरीले ट्याक्टरबाट डोरिले बाँधिएका १७ पोका गाँजा बरामद गरिएको जनाएको छ । जसको कूल तौल १६० किलो रहेको छ ।
इमानसिंहसँगै ट्याङ्ककर चालक सोमबहादुर थोकरलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका दुवै जना मकवानपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
फेरि सल्बलाए गाँजा तस्कर
गत वर्ष (२०७३) पुस अन्तिमतिर लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोले नै मकवानपुरमा विशेष कार्यक्रम गरी ‘गाँजा मुक्त’ अभियानले सार्थकता पाएको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला व्यूरोको नेतृत्व तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दले गरेका थिए ।
व्यूरोको घोषणापछि गाँजा खेती हुने भनेर कहलिएका मकवानपुरका गाउँमा गाँजा खेती हुन पनि छाड्यो । तर गाँजा कारोबारीहरूले भने खेतीका लागि नयाँ ठाउँ रोजेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार वैशाख १ गते बरामद गरिएको गाँजा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने पुरानो गाउँ र आखिटार भन्ने ठाउँमा उत्पादन र संकलन गरिएको हो ।
‘गाँजा कारोबारीले अहिले ठाउँ फेर्दै गाँजाको खेती गर्न थालेको देखिन्छ,’ लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) प्रेम शाहीले भने, ‘कारोबारीहरूले गाँजा खेतीमा लगानी गर्नेदेखि स्थानीयलाई खेती गर्न उक्साउनेसम्मका कार्य गर्दै आएका छन् ।’
५ हजारमा किन्ने १५ हजारमा बेच्ने !
प्रहरीका अनुसार गाँजाको कारोबारमा ३ तहका तस्करहरू सक्रिय छन् । पहिलो तहका तस्करहरू गाँजा खेतीमा लगानी गर्ने, स्थानीय किसानबाट गाँजा संकलन गर्ने तथा किसानहरुलाई गाँजा खेती गर्न उक्साउने खालका हुन्छन् ।
पहिलो तहका तस्करले किसानबाट गाँजा खेती गरेर आफूभन्दा माथिल्लो तहका तस्करसँग बिक्री गर्छन् । पहिलो तहका तस्करले किसानबाट प्रतिकिलो ५ हजारमा गाँजा खरिद गर्ने गर्छन् । उनीहरुले दोस्रो तहका तस्करलाई बिक्री गर्दा प्रतिकिलो १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
दोस्रो तहका तस्करले गाँजालाई चरेस उत्पादन गर्नका लागि ‘कम्प्रेस्ड’ (विशेष प्रकारले प्रशोधन गर्ने) काम गर्छन् । उनीहरूको राष्ट्रिय रुपमा विशेष सञ्जाल नै रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गाँजा कम्प्रेस्ड भइसकेपछि दोस्रो तहका तस्करले तेस्रो तहका तस्करलाई सम्पर्क गर्छन् । तेस्रो तहका तस्करहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सम्पर्क र सञ्जाल हुन्छ ।
तेस्रो तहका तस्करकै योजनामा गाँजा नेपालबाट बाहिर तस्करी हुन्छ । तेस्रो तहका तस्करले नै कुन बाटो भएर कहाँ पठाउने भन्ने योजना बनाउँछन् । तर काम भने दोस्रो तहका तस्करले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वैशाख १ गते पक्राउ परेका इमानसिंह स्याङ्बो दोस्रो तहका तस्कर भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले तेस्रो तहका तस्करको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।
इन्धन बोक्ने ट्याङ्ककरमा गाँजा तस्करी हुने गरेको भन्ने घटना पहिलोपटक सार्वजनिक भएको व्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ठूले राईले बताए ।
घटनामा ट्याङ्कर धनीको पनि संलग्नता रहेकोबारे छानबीन भइरहेको राईको भनाइ छ ।